1 SAMOELA 17.1-24 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 SAMOELA 17.1-24 F. 2
EO ANATREHAN’NY OLANA (1)
Tafihina (1-3). Na dia efa nolavin’Andriamanitra tsy ho mpanjaka intsony ary i Saoly dia tsy maintsy miatrika ny fanafihan’ny Filistina ihany. Ary dia ny Filistina no nametraka ny fepetra amin’ny ady : raha misy olona maharesy an’i Goliata dia resy ny Filistina fa raha tsy izany dia hanompo azy ireo ny Israely (9).
Ny haben’ny fahavalo (4-7). Telo metatra ny halavany, 60 kilao ny lanjan’ny fiarovan-doha sy fiarovan-tratra varahina, ny lela lefony fotsiny dia efa milanja fito kilao. Ankoatr’izay dia voalaza fa « champion » izy (mpihantsy ady, 4).
Ny vavan’ny fahavalo (8-11). Tsy vitan’ny efa mampihorohoro ny tsanganan’i Goliata, fa na ny vavany koa aza dia mampatahotra, lazainy fa mpanompon’i Saoly ireto miaramila ireto. Ankoatr’izay dia mandeha ihany ny fihantsiana izay naharitra 40 andro, tsy mora izany ka nahatonga ny miaramila nivadi-po sy raiki-tahotra loatra.
Ny nataon’i Saoly (12-16). Izy telolahy efa nolavin’ny Tompo no nentiny niara-niady taminy (16.6-9 ; 17.12-14) fa ilay efa hitany fa lehilahy mahery sy mpiantafika (16.18) dia mbola hadinony indray. Tsy nahahetsika nandritra ny efapolo andro izy sy ny miaramilany.
Ny nataon’i Davida (17-24). Irakiraka fotsiny aloha ny andraikitr’ilay faralahy hatreto. Indraindray any amin’i Saoly, indraindray miandry ondry ary eto hanatitra vatsy. Noho ny fankatoavany ny rainy dia namela ny ondriny hotandreman’olona izy fa nandeha hijery ireo ondry hafa izay mila ny fanampiany kokoa.
Inona no ataonao eo anatrehan’ny olana ? Mijery ny habe sy ny vavan’ilay olana dia taraiky eo sa vonona mihazakazaka mankato tahaka an’i Davida? Jesoa koa dia tahaka izany (Hebreo 5.8).